Canary ကျွန်းစုများထဲမှအလှဆုံးများဖြစ်သော La Gomera တွင်ကြည့်ရမည့်အရာများ ခရီးသွားသတင်းများ
လူးဝစ် Martinez | 11/10/2021 12:33 | Espana, ကျွန်းများ
La Gomera တွင်ကြည့်ရမည့်အရာသည်ဤ Canarian ကျွန်းသို့ခရီးသွားရန်ပြင်ဆင်နေသူများစွာတို့ကိုယ်တိုင်မေးသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤစပိန်ကျွန်းစုများအနက်လူသိအနည်းဆုံးဖြစ်သည့် Tenerife ထက်လည်ပတ်မှုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ငါတို့ဒီမှာမင်းကိုထားခဲ့မယ်။ Tenerife အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) သို့မဟုတ် Gran Canaria
သို့သော် La Gomera သည်နေရာတိုင်းတွင်အလှတရားများနှင့်ပြည့်လျှံနေသည်။ ကြေငြာခဲ့သည် ဇီဝထု၏သဘာဝအရံ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်သဘာဝဥယျာဉ်များ၊ ကျက်သရေအပြည့်ရှိသောမြို့ငယ်များနှင့်ကျော်ကြားသောရာဘာဝီစီကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကမ်းခြေများနှင့်ထူးခြားသောမြို့များကိုပေးသည်။ နောက်ဆုံးအရာသည်ကျွန်း၏မူလတိုင်းရင်းသားများကအသုံးပြုခဲ့ပြီးကြေငြာခဲ့သည့်ဘိုးဘွားဆက်သွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ သင်တွေးမိလျှင် La Gomera မှာဘာကြည့်မလဲဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 La Gomera တွင်လည်ပတ်ရမည့်အရာ - Garajonay မှလှပသော San Sebastiánသို့
1.1 Garajonay အမျိုးသားဥယျာဉ်
1.2 La Gomera တွင်ကြည့်ရန်အခြားသဘာဝအထိမ်းအမှတ်များ
1.3 La Gomera ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ
1.6 La Gomera ရှိအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော Vallehermoso
La Gomera တွင်လည်ပတ်ရမည့်အရာ - Garajonay မှလှပသော San Sebastiánသို့
Garajonay အမျိုးသားဥယျာဉ်ကဲ့သို့သောသဘာဝအံ့ဖွယ်ရာများသို့ သွား၍ ဤ Canarian ကျွန်း၏ခရီးစဉ်ကိုစတင်ပါမည်၊ ကျွန်း၏မြို့တော် San Sebastián de la Gomera ၌ပြီးဆုံးသည်။
ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝသည်ကျွန်း၏ ၁၀% ကျော်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီး၎င်း၏အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ပန်းခြံသည်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသောထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ၎င်း၏နာမည်ကိုလက်ခံသည်။ Garajonayမီတာ ၁၅၀၀ နီးပါးမြင့်သော La Gomera တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဤသဘာဝအာကာသသည်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်သည် Laurel သစ်တောများ၎င်းကိုသဘာဝစစ်မှန်သောအမွေဟုယူဆကြသည်။ သူတို့သည်တတိယအဆင့်ကာလ၏ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီးနေရာတိုင်းနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ၎င်းတို့ကို fayas, heather, ferns နှင့် laurels တို့ဖြင့်အဓိကဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒီပန်းခြံကိုသိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင့်၌၎င်း ဖြတ်၍ ပြေးသောအမှတ်အသားများမြောက်မြားစွာရှိသည်။ ဒါ့အပြင်မင်းမှာအပန်းဖြေစရာနေရာရှိတယ် Big Lagoon ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ဘောလုံးကစားနည်းမြို့နယ်၏ပိုင်၊ အပ်ဧည့်သည်ဗဟိုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
La Gomera တွင်ကြည့်ရန်အခြားသဘာဝအထိမ်းအမှတ်များ
သို့သော် Garajonay သည်ဤ Canarian ကျွန်းတွင်တစ်ခုတည်းသောသဘာဝဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည် Majona သဘာဝပန်းခြံတိုက်စားမှုကြောင့်လျှိုမြောင်ကြီးများကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးစိတ်များရှိသည်။
သဘာဝကဲ့သို့သောအထိမ်းအမှတ်များ Roque Blancoယင်း Carretónရဲ့ Loin သို့မဟုတ် la Calderaမရ။ အစွန်ဆုံးသည်ကျွန်းပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသောအကောင်းဆုံးမီးတောင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ မင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အရာကတော့အဲဒါဘဲ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဤတူရိယာ၏ပြွန်များကိုမျိုးပွားနိုင်သောချောက်ကမ်းပါး၌ပုံစံမျိုးစုံရှိသည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့် La Gomera တွင်မြင်ရမည့်သဘာဝအံ့ဖွယ်များအကြောင်းကိုပြောပြရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ Puntallana နှင့် Benchijigua၊ Orone ၏ကာကွယ်ထားသောရှုခင်း၊ Alajeróနှင့် Charco del Conde ၏ချောက်ကမ်းပါးများနှင့်ချောက်ကမ်းပါးများနှင့်လျှိုမြောင်များပါ ၀ င်သောသဘာဝသယံဇာတများကိုလည်းငါတို့ဖော်ပြလိမ့်မည်။ လှေကားထစ်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
La Gomera ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ
La Calera ကမ်းခြေနှင့် la Méricaကမ်းပါးများ
သူ့ရဲ့ခမ်းနားတဲ့ကမ်းခြေတွေမှာမရပ်ဘဲ La Gomera မှာဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုတာငါတို့မပြောနိုင်ဘူး။ သူတို့အားလုံးမှာသဲမဲတွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကရေချိုးခန်းအတွက်သူတို့ကိုပိုလှအောင်ဒါမှမဟုတ်အကြံဥာဏ်မပေးပါဘူး။ တကယ်တော့ကျွန်းမှာ Canary မှာအကောင်းဆုံးတွေရှိတယ် (ဒီမှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် ကျွန်းစုကမ်းခြေများအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်).
ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်မင်း၏ကမ်းခြေရှိသည် la Caleta Hermigua ၌ ၎င်းသည်မီးတောင်သဲနှစ်မီတာသာရှိသော်လည်း၎င်းသည် ပို၍ ပင်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရေကူးရန်ပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းများမှကာကွယ်ထားသည်။ ကမ်းခြေသည်အလွန်နီးသည် စန်တာ Catalina၎င်းသည်လှပသောသဘာဝရေကန်ရှိသော်လည်း surfing ကဲ့သို့ပင်လယ်ရေကြောင်းအားကစားများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီလိုနေရာမျိုးတွေအကြောင်းပြောရင်နေရာတွေကပိုကောင်းတုန်းဘဲ Vallehermoso ရေကြောင်းဥယျာဉ်.
La Gomera ၏တောင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းခြေများကိုအကြံပြုသည် la Calera နှင့် အင်္ဂလိပ် Valle Gran Rey ၌ ၎င်းတို့အနက်ပထမသည်၎င်း၏လှိုင်းအနိမ့်များကြောင့်ကလေးများနှင့်သွားရန်သင့်တော်ပြီးဒုတိယမြောက်ကိုကျွန်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့မခန်းကမ်းပါးတစ်ခု၏တောင်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏အပျိုစင်လေကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်Alajeró၌သင်၏ကမ်းခြေရှိသည် စန်တီယာဂို၎င်း၏ငါးမွေးမြူရေးဥစ္စာများကြောင့်ရေငုပ်ရန်အထူးသင့်တော်ပြီး San Sebastián de La Gomera ၌သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်သည်။ La Guancha နှင့်၏ ဂူအိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးမှတ်မိသည်။
La Guancha သည်အဖော်အချွတ်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်းပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ။ Tapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito နှင့် las Arenas စသည့်အခြားအရာများလည်းရှိသည်။
Canary Island ၏သဘောသဘာဝကိုကောင်းကောင်းလေ့လာပြီးနောက် La Gomera တွင်ကြည့်ရမည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော၎င်း၏မြို့အချို့ကိုသွားလည်ပါမည်။ ငါတို့သည်ခိုင်ခံ့သောတောင်များကြားတွင်တည်ရှိသောAlajeró (စထရိ၊ Garajonay ပန်းခြံ၏ဧရိယာတစ်ခု) တွင်တည်ရှိပြီးအံ့မခန်းကမ်းပါးများမှတစ်ဆင့်ပင်လယ်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
Alajeróသည်၎င်း၏စည်ပင်သာယာအသုံးအနှုန်းဖြစ်သောကြောင့်မဖြစ်မနေလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည် La Gomera လေဆိပ်မရ။ သို့သော်လည်းလှပသောနေရာဒေသတွင်သင်မြင်နိုင်သည် El Salvador ဘုရားကျောင်း၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် El Paso ၏ Virgin of Our Lady ၏ Hermitageမြို့၏နာယက၊
La Gomera တွင်ကြည့်ရန်မြို့များထဲမှ Hermigua ၏မြင်ကွင်း
ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးဤမြို့သည်နေရာဖြစ်သည် La Gomera လူမျိုးရေးပြတိုက်ကျွန်း၏ရိုးရာဓလေ့များကိုသိလိုလျှင် Los Telares ပန်းခြံနှင့်ဖြည့်စွက်ထားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်မြင်နိုင်သည် Santo Domingo de Guzmán၏သီလရှင်၁၅၉၈ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ San Juan ၏သင်္ချိုင်းနှင့် incarnation ၏ဘုရားကျောင်း၊ neo-Gothic နှင့် neo-Byzantine ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ထားသောလှပသောဘုရားကျောင်း
ဒါပေမယ့် Hermigua ရဲ့ကြီးမားတဲ့သင်္ကေတကတော့ Roques de Pedro နှင့် Petraသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္haveာရီပါတဲ့အံ့မခန်းမီးတောင်နှစ်ခု။ ဤအဆိုအရသူတို့နှစ် ဦး သည်လျှပ်စီးလက်။ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းခံရသောချစ်သူနှစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။
La Gomera ရှိအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော Vallehermoso
ခံ့ညားထည်ဝါစွာကာကွယ်ထားသည် Roque CanoVallehermoso မြို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးသော Los Órganos၏သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံလည်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ရွာကိုအလည်အပတ်သွားခြင်းဟာလှပတဲ့အရာနဲ့စရမယ် အခြေခံဥပဒေပလာဇာ၎င်း၏ Canarian ပုံစံလသာဆောင်နှင့်ဘားများနှင့်ပြည့်နေသောမြို့တော်ကောင်စီက ဦး ဆောင်သည်။
ဒါ့အပြင်မင်းကိုမြင်ရမယ် San Juan Bautista ၏ဘုရားကျောင်းXIX ရာစု Neo-Gothic ဘုရားကျောင်း၊ Discovery ၏အံ့မခန်းရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမျိုးစိတ်များနှင့် Castillo del Mar ၏ရုပ်ကြွင်းများပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ငှက်ပျောသီးတင်ပို့ရန် ၁၉ ရာစုအကုန်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောတင်သင်္ဘော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vallehermoso davit ဟုလည်းခေါ်သည်။
နာမည်ကျော်ခံ့ညားတဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့တောင်ခြေမှာတည်ရှိပါတယ် ရာဘာပီပီValle Gran Rey သည်လှပသောငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အားကစားဆိပ်ကမ်းကိုသင့်အားပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမြို့လေးမှာလည်းမင်းမြင်နိုင်ပါတယ် သန့်ရှင်းသောဘုရင်များ၏သင်္ခမ်းစာ၁၆ ရာစုအစတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Palmarejo ရှုထောင့်Lanzarote အနုပညာရှင်César Manrique မှ ဖန်တီး၍ ဤလှပသောချိုင့်ဝှမ်းကိုသင်အံ့မခန်းမြင်ကွင်းများကိုပေးသည်။
၎င်းသည်ဤဒေသတွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တော့ La Gomera သည်ရှုခင်းများရှိသောကျွန်းဖြစ်သည်။ Santo, Curva del Queso နှင့် La Retama ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ နောက်ဆုံး၊ လတိုင်းရဲ့ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့မှာမင်းမြို့ထဲမှာသွက်လက်တဲ့ဈေးတစ်ခုရှိတယ်။
San Sebastian က de La Gomera
ငါတို့ရဲ့လှပတဲ့မြို့တော်မှာငါတို့ရဲ့ကျွန်းကိုငါတို့ရဲ့လေ့လာရေးခရီးပြီးသွားပြီ။ San Sebastián de la Gomera သည်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောလူ ဦး ရေတစ်သောင်းမျှသာရှိသောမြို့ငယ်လေးဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေအကြောင်းငါတို့ပြောပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာလည်းအထိမ်းအမှတ်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဒါ့အပြင်သူမကိုယ်တိုင်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ကမ်းရိုးတန်းကုန်းပေါ်သို့တက်ပြီးလမ်းများနှင့်ပုံမှန် Canarian အိမ်များနှင့်ပြည့်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မင်းကိုသွားကြည့်ဖို့အကြံပေးတယ် အဆိုပါယူဆချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်းပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၁၅ ရာစုမှမူလအစကဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည် Gothic, Mudejar နှင့် Baroque ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အတွင်း၌လှပသောနံရံဆေးရေးပန်းချီအချို့ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပိုင်ဆိုင်သည် Count's TowerLa Gomera ၏သင်္ကေတဟုယူဆသည်။ အဖြူရောင်နှင့်အနီရောင်ကျောက်တုံးတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဧည့်ခံရာနေရာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်ကျွန်း၏ရုပ်ပုံပြပွဲတစ်ခုကိုပြသသည်။
သင်တို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ကိုလံဘတ်စ်အိမ်၁၈ ရာစုအဆောက်အ ဦး အမေရိကမသွားခင်ဒီနေရာကအိမ်ကို navigator ကတည်းခိုခန်းအဖြစ်သုံးခဲ့တာကြောင့်ဒီနာမည်ကိုလက်ခံရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်သည်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီအနုပညာပြတိုက်၏လှပသောနေရာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စန်းSebastián၏ရသေ့ ၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး La Gomera ၏နာယကသူတော်စင်ဟုခေါ်သည့်သူတော်စင်ရုပ်တုကိုတည်ဆောက်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုတောင်လှသေးတယ် Aguada ၏ရေတွင်းအိမ် သို့မဟုတ်အကောက်ခွန် Columbus သည် New Continent ကိုကောင်းချီးပေးသောရေကိုသောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရိုးရာ Canarian ပုံစံအတွက်ပေါ်လွင်ပြီးလက်ရှိတွင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၏ခရီးအတွက်တိကျသေချာသောပြတိုက်တစ်ခုရှိသည်။
San Sebastián de La Gomera ရှိ Plaza de América၊
ဤအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များစွာသည်ဘုရား၌ရှိသည် တကယ့်လမ်းSan Sebastián de la Gomera တွင်အရေးအပါဆုံး၊ လူသွားလူလာများသည့်ဆိုင်များ၊ ဘားများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော်အားလုံးထက်၎င်းကို Los Quilla၊ Los Condes သို့မဟုတ် Casa Darias ကဲ့သို့သော Canarian အိမ်များစွာဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၁၈ ရာစုအဆောက်အ ဦး တစ်ခုမှာမင်းမှာရှိတယ် La Gomera ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်Guanche ယဇ်ပလ္လင်များနှင့်ကျွန်း၏မူလယဉ်ကျေးမှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအပန်းဖြေနိုင်သောနေရာများရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပါပြီ La Gomera မှာဘာကြည့်မလဲမရ။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ၊ တိတ်ဆိတ်သောကမ်းခြေများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအမွေအနှစ်များကိုခံစားမည့်အံ့သြဖွယ်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုသင်၎င်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်မည်သို့သုံးစွဲခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » La Gomera တွင်ကြည့်ရမည့်အရာများ